Usaljụ ọrụ | Law & More B.V.
blog » Usaljụ ọrụ
Ọ na-ewe iwe ma ọ bụrụ na onye ọrụ gị anaghị eso ntuziaka gị. Dị ka ihe atụ, onye ọrụ ị na-enweghị ike ịtụkwasị obi ịbịa n ’ụlọ ọrụ ya na ngwụsị izu ma ọ bụ onye chere na uwe gị dị mma emetụtaghị ya. Ọ bụrụ na nke a emee ugboro ugboro, ọ nwere ike iwe oke iwe. N'ụzọ dị mma, iwu na-enye azịza maka nke a. N'okwu abụọ a, yana ọtụtụ ndị ọzọ, enwere ike ịgọnahụ gị ịrụ ọrụ. N’isiokwu a anyị na-akọwa mgbe nke a mere na ihe ị nwere ike ime banyere ya dịka onye were gị n’ọrụ. Nke mbu anyi gha abanye n’ime ntuziaka ị, dika onye were gị n’ọrụ, nwere ike inye. Ọzọ, anyị ga-atụle ntuziaka onye ọrụ nwere ike ịjụ yana nke, n'aka nke ọzọ, ga-eduga n'ịjụ ọrụ. N'ikpeazụ, anyị ga-atụle nhọrọ ndị ị nwere dị ka onye were gị n'ọrụ maka ịnagide ọrụ.
Kedụ ntuziaka ka enyere gị ka ị were gị n'ọrụ?
Dịka onye were gị n'ọrụ, ịnwere ikike ịkụziri gị ihe iji gbaa ndị ọrụ ahụ ume ka ha rụọ ọrụ. Na ụkpụrụ, onye ọrụ gị ga-agbaso ntuziaka ndị a. Nke a sitere na mmekọrịta nke ikike dị n'etiti onye ọrụ na onye were ya n'ọrụ dabere na nkwekọrịta ọrụ. Ikike nke ntuziaka a metụtara iwu ndị metụtara ọrụ (dịka ọrụ ọrụ na iwu uwe) yana ịkwalite usoro dị mma n'ime ụlọ ọrụ (dịka oge ọrụ, ụkpụrụ omume omume na nkwupụta okwu na soshal midia). Iwu ji onye ọrụ gị n'ọrụ ịgbaso ntuziaka ndị a, ọbụlagodi na ha apụtaghị site na okwu nke nkwekọrịta ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ naghị eme ya wee nọgidesie ike na-eme ya, ọ pụtara na a jụ ịrụ ọrụ. Ka o sina dị, ọtụtụ nuances na-etinye ebe a, nke a kọwara n'okpuru.
Ezi uche dị na ozi
Ọrụ gị dị ka onye were gị n'ọrụ agaghị esoro ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya. Ọrụ dị mma ma ọ bụrụ na enwere ike ịhụ ya dị ka akụkụ nke nkwekọrịta ọrụ n'ọnọdụ ịbụ ezigbo onye ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ịrịọ arịrịọ maka ịrụ ọrụ oge ọrụ na ụlọ ahịa n'oge oge Krismas na-arụsi ọrụ ike nwere ike ịbụ ọrụ ezi uche dị na ya, mana ọ bụghị ma ọ bụrụ na ọ na-eduga n'izu ọrụ nke ihe karịrị awa 48 (nke, na mgbakwunye, ọ bụ iwu na-akwadoghị na ngalaba 24 ngalaba nke abụọ 1 nke Usoro Ọrụ). Ma ihe omume ọ̀ bụ ihe ezi uche dị na ya na ịjụ ọrụ dabere na ọnọdụ nke ikpe ahụ na mmasị dị na ya. A ghaghị iburu ihe onye ọrụ ahụ jụrụ na ihe mere onye were ya n’ọrụ anya ji mee ka e nye ya ọrụ. Ọ bụrụ na enwere ike iche na onye ọrụ ahụ nwere ezigbo ihe kpatara ọ ga-eji jụ ọrụ ahụ, enweghị ajụjụ ọ bụla maka ịjụ ọrụ.
Mgbanwe dị iche nke ọnọdụ ọrụ
Ọzọkwa, onye were gị n'ọrụ nwere ike ọ gaghị agbanwe otu ọrụ naanị ya. Iji maa atụ, ụgwọ ọnwa ma ọ bụ ebe ọrụ. A ga-emerịrị mgbanwe ọ bụla na ndụmọdụ onye ọrụ. Ewezuga na nke a bụ na n’ụfọdụ, enwere ike ịhapụ ya ma ọ bụrụ n’itinye ya na nkwekọrịta ọrụ maọbụ na gị, dịka onye were gị n’ọrụ, nwere nnukwu mmasị ime ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nke a, anyị na- Law & More dị njikere ịza ha maka gị.
Kedu mgbe onye ọrụ nwere ike ịjụ ntụziaka gị?
Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ nwere ike ịjụ ọrụ na-enweghị isi yana, ọzọkwa, nwere ike ọ gaghị agbanwe ọnọdụ ọrụ naanị ya, enwere ọrụ ndị ọzọ na-esite n'ihe ndị chọrọ ezigbo onye ọrụ na onye were ha n'ọrụ chọrọ. Ndị a gụnyere ụkpụrụ ahụike na nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ ga-elebara ọnọdụ anụ ahụ nke ndị ọrụ anya ma ọ bụrụ na afọ ime ma ọ bụ enweghị ike ọrụ, dịka ọmụmaatụ. Onye ọrụ enweghị ike ịrịọ onye ọrụ ka o soro ntuziaka ndị na-etinye ahụike ya n'ihe egwu ma gha hụ na ọnọdụ ọrụ adịghị mma. A ghaghị iburukwa ihe ndị jụrụ akọ na uche n'uche ma ọ bụrụhaala na a pụrụ ịrụ ọrụ ahụ n'ụdị kwesịrị ekwesị.
Ọnọdụ nke ikpe ahụ
Ọ bụrụ na ntuziaka gị kwekọrọ n'ụkpụrụ ndị akọwara n'elu na onye ọrụ gị na-aga n'ihu na-ajụ ha n'ụzọ na-adịgide adịgide, nke a bụ ịjụ ọrụ. E nwere ụfọdụ ikpe a na-ahụkarị ebe ajụjụ bụ ma è nwere arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enweghi ike ịrụ ọrụ, (ọrịa) na-anọghị ma ọ bụ onye ọrụ na-achọghị ịrụ ọrụ ezi uche dị na ya n'ihi na ha anaghị arụ ọrụ ya. Ma enwere ịjụ ịrụ ọrụ siri ike dabere n'ọnọdụ nke ikpe ahụ na nrụgide nke onye ọrụ gị, yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na ịkpachara anya ma chọọ ndụmọdụ gbasara iwu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Nke a metụtara n'ezie mgbe ị na-atụle usoro ntinye. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ma enweghi ike ịrụ ọrụ n'ezie ma ọ bụrụ na onye ọrụ gị jụrụ ịrụ ọrụ n'ihi nke a, ọ dị mkpa ka ị chere echiche nke onye ọrụ ahụike na nchekwa yana ọrụ ma ọ bụ dọkịta ụlọ ọrụ. Ọnọdụ ndị ọzọ bụ eziokwu doro anya nke ịjụ ọrụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ na, n’obere oge ị nweta ụgwọ ọrụ, ị nyela onye ọrụ gị ohere ịhapụ iwepụ oge ma ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ike ịbịaru ya, mana ọ ga-emezi ezumike na mpaghara dịpụrụ adịpụ ma agaghị enweta ya.
Ihe si na arụ ọrụ jụrụ
Ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ jụ ọrụ ya, ị dịka onye were gị n'ọrụ chọrọ itinye ọnụ ọsọ ọsọ ka enwere ike iji jigide ikike gị. Ọ dị mkpa ịme ihe kwesịrị ekwesị n'okwu a. Nwere ike ịnye onye ọrụ ọrụ ịdọ aka na ntị. Nke a nwere ike ịgụnye ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ ịkwụsị inye ego maka oge ọrụ a jụrụ. N'ihe banyere ịjụ ịrụ ọrụ ugboro ugboro, ọ ga-ekwe omume ịme ihe ndị ọzọ dị ka mgbasa ma ọ bụ nchịkọta mgbasa. N’ikwu ya, ịjụ ọrụ bụ ihe kpatara ọsịsa a chụpụ ya.
Dika iguru n’elu, ajuju mgbe enwere iju oru na ihe ndi kwesiri ekwesiri ime n’okwu a dabere n’onodu obula na nkwekorita emere n’etiti onye were oru na onye oru. You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nke a? Biko kpọtụrụ Law & More. Otu ndi otu anyi ji eme ihe. Anyị na gị ga-atụle ohere gị. Na ndabere nke nyocha a, anyị ga-enwe obi ụtọ ịdụ gị ọdụ na usoro ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na nke a dị mkpa, anyị ga-enye gị ndụmọdụ na enyemaka n'oge ị na-eme usoro.
Next Post Omume arụkwaghịm